U sheeg wakiilladayada gobolka: u codee HB1194! - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Maxaa kucusub CIRC > U sheeg wakiilladayada gobolka: u codee HB1194!
U sheeg wakiilladayada gobolka: u codee HB1194!
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in biilkeena HB-1194 uu dhaafay Aqalka iyo Guurtida! Ficilkani sii noolaan maayo oo waxaa loo xafiday ujeeddooyin taariikhda goobta ah.
HB1194, biilkeenna si loo abuuro Sanduuqa Difaaca Sharciga ee Socdaalka ee gobolka oo dhan, ayaa lagu garaaci doonaa dabaqa guriga cod toddobaadkan! Hadda, waxaa muhiim u ah Wakiilladayada Gobollada in ay maqlaan in xubnahoodu ay taageersan yihiin biilka.
Dadka wajahaya tijaabooyinka laanta socdaalka xaq uma lahan damaanad qaad qareen hadii aysan awoodin midkood, laakiin kuwa haysta qareennimo waxay 10 jeer uga dhawyihiin inay ku guuleystaan ​​kiisaskooda. Sanduuqa difaaca sharciga ee socdaalka Denver wuxuu siiyay in kabadan 400 oo soogalooti ah oo ku sugan magaalada wakiil toos ah. Waxaan u baahanahay sanduuq dhaqaale oo gobolka oo dhan ah si loo hubiyo in Coloradans-ka guud ahaan gobolka loo damaanad qaaday helitaanka wakiil sharci.
Waxaan u baahanahay IN AAD email ugu dirto wakiiladaada gobolka maanta oo aad ku booriso inay HAA ugu codeeyaan HB1194. Biilkan muhiimka ah wuxuu noqon doonaa tallaabo horay loo qaaday oo lagu ilaalinayo xuquuqda aasaasiga ah ee nidaamka xuquuq dhowrista leh ee maxkamadaha dhammaan Coloradans, iyadoon loo eegin xaaladda socdaalka.